यस्तो छ नयाँ करको दायरा : कति कमाउनेलाई कति कर ? « Khabarhub
यस्तो छ नयाँ करको दायरा : कति कमाउनेलाई कति कर ?
काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आज पहिलो दिन । आजबाट सरकारले ल्याएको नयाँ नीति तथा बजेट अनुसार सरकारी कामकारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछन । योसँगै आजैबाट हामीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व पनि हेरफेर हुनेछ भने सरकारले बजेट घोषणा गर्दा उल्लेख गरेका विषय आजबाट कार्यान्वयनमा आउने छन्।
७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा थप ३० प्रतिशतका दरले ३ लाख ७५ हजारसमेत गरी ४ लाख २९ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । २० लाखभन्दा बढीको आम्दानीमा भने ७ लाख ५० हजारदेखि २० लाख रुपैयाँमा लागेको ३० प्रतिशत करमा थप २० प्रतिशत अर्थात् ३६ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्दै जानुपर्छ । यसको अर्थ २१ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७६, बुधबार ६ : ४७ बजे